Ilali ekunxweme lweP920K nguPadre Escapes
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguPadre Escapes
UPadre Escapes unezimvo eziyi-1136 zezinye iindawo.
Ilali ekufutshane nolwandle i-P920K: Indawo entle eNtsha yeeNdawo zokulala ezi-5 kwiDolophu nje yokuphuma elunxwemeni! Ukulala 18!
Sihlala sizingca kakhulu ngokucoceka kwezakhiwo zethu kwaye siyaqonda ukuba oku kubaluleke kakhulu ngoku kunangaphambili. Sithathe amanyathelo angqongqo okucoca ukuze sikwazi ukunika iindwendwe indawo ecocekileyo, ekhululekile, nekhuselekileyo ukuba yonwabele.
Ilali ekwiSigaba sesi-2 soLwandle ibonelela ngeyona nto iNgqwesileyo kuyo yonke into! Amachibi amabini angcono kwiSiqithi, indawo yokudlala yabantwana, iipropathi ezintsha kraca kwaye zonke zikwindawo elungeleyo ezizinyathelo nje ukusuka eLwandle.
Awukuphela nje ukuba usondele elunxwemeni kodwa ukwanguMgama nje omfutshane ukusuka kuyo yonke into esiSiqithi esinokubonelela ngayo, kubandakanya neWaves Resort Water Park entsha. Ngaba uyafuna ukujonga i-Texas State Aquarium okanye i-USS Lexington? Emva koko thatha nje i-20-25 imizuzu yokuqhuba edolophini kwaye uyonwabele apho ngaphambi kokuba ubuyele umva ukutshonisa iinzwane zakho esantini.
Ilali engaseBeach P920 yipropathi emangalisayo. Inemigangatho emithathu yezinto zangaphakathi ezihonjiswe kakuhle kunye namabali amathathu epatio / indawo yebalcony ukonwabela yonke ngelixa ibekwe ngaphaya kwesitrato ukusuka kumanzi aluhlaza omeraldi aqaqambileyo eGulf of Mexico. Uya kuzithanda iimpawu eziphezulu kunye nokuhonjiswa konxweme kuyo yonke le propathi.
Ukuqala kwinqanaba eliphezulu uya kufumana indawo yokuhlala kunye nebalcony yabucala ekunika umbono omkhulu weendunduma eziselunxwemeni kunye neGulf of Mexico. Ikhitshi, indawo yokutyela, kunye neendawo zokuhlala zivulelekile omnye komnye kwaye zabelana ngeskimu sombala esithambileyo sonxweme esibonakaliswa ngoonokrwece baselwandle kunye neenkuni eziqinileyo. Kukho i-queen sleeper sofa kwigumbi lokuhlala. Le yindawo entle yokudibana nosapho kunye nabahlobo. Ikhitshi kunye negumbi lokutyela lixhotyiswe ngayo yonke into onokuyidinga ukwenza ukutya okumnandi. Iindwendwe zingonwabela ukutya kwazo etafileni yokutyela okanye kwibar yesidlo sakusasa. Ukuhamba udlula kwindawo yokutyela uya kufumana igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokulala kuphela kumgangatho ongaphezulu.
Kwinqanaba lesibini uya kufumana amagumbi amabini okulala ngaphezulu, ngalinye linendawo yalo yokuhlambela. Kwinqanaba lokuqala uya kufumana elinye igumbi lokulala elinegumbi lokuhlambela kunye nokufikelela kwipatio. Kukwakho nendawo yokuhlala yesibini elala iindwendwe ezimbalwa kwaye inendlela yokungena kwipropathi.
Xa ulungele ukwenza iinkumbulo zobomi bonke kunye nosapho lwakho yiza uhlale eLalini ngaseBeach P920.
Iibhedi (iindawo zokulala ezili-16): I-master enebhedi enkulu, igumbi lokuqala leendwendwe linebhedi enkulu kunye nebhedi enkulu, igumbi lesibini leendwendwe elinebhedi enkulu, igumbi lesithathu leendwendwe linebhedi enkulu kunye neebhedi ezimbini. I-queen sleeper sofa, i-Queen sleeper sofa kwigumbi lokuhlala eliphezulu.
-Iilinen zebhedi nganye kunye neetawuli zokuhlambela zondwendwe ngalunye zibonelelwe.
-Ubuncinci bokuhlala ubusuku obubini bufunekayo.
-Abandwendweli bekhontrakthi basePadre Escapes kufuneka babe neminyaka eyi-25 kwaye babe neLayisensi yoMqhubi kaRhulumente okanye enye i-ID eyamkelekileyo.
-AKUKHO IZILWANYANA EZIVUMELEKILEYO
Ubungakanani: 188 m2.
Izinto eziluncedo: I-Cookware & neZitya zaseKitchen, 2 x i-ayina & nebhodi yoku-Ayina, 2 x Isixhobo sokucoca iinwele, umatshini wokuvasa, umatshini wokuhlamba izitya, iTV, iBalcony, iKhitshi, i-oven, 2 x microwave, 2 x toaster, 2 x ikofu maker, satellite TV, uxhumano lwe-intanethi , air conditioning, 2 x sofabed, isitovu, 2 x king size bed, DVD player, iiTowels, BBQ grill, blender, 2 x Queen sizen, Ibhedi yelinen, Dryer, Ukuloba, igalufa, ukukhwela ihashe, akuvumelekanga izilwanyana zasekhaya, Pool eshushu , Ukuhamba ngesikhephe, ukufudumeza, ukuPaka, ifriji, ichibi loluntu, iPatio, Ilungele abantwana, iJonga laManzi;
4 x Igumbi lokuhlambela, 5 x Igumbi lokulala
Iibhedi ezinkulu eziyi-2, \_u00A0Iibhedi ezinkulu eziyi-2, iisofa ezikwazibhedi eziyi-2
Umbuki zindwendwe ngu- Padre Escapes
Izimvo eziyi-1 137
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Corpus Christi